Ozi e nyere na Medjugorje na Septemba 2, 2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na Septemba 2, 2016
di Paolo Tescione - Septemba 2, 2016
Ezigbo ụmụaka, site n’ọchịchọ nke Ọkpara m na ịhụnanya nne, nye unu ụmụ m, ọkachasị ndị na-amataghị ihunanya nke Ọkpara m, abịakwute m unu. Who na-echeta m, gị onye na-akpọku m.
You nwere obi dị ọcha ma na-emeghe? You na-ahụ onyinye, ihe ịrịba ama nke ọnụnọ m na ịhụnanya m? Childrenmụ m, n'ime ndụ nke ụwa a, na-aga n'ihu ịgbaso ihe nlereanya m. Ndụ m abụwo ihe mgbu, ịgbachi nkịtị, oke okwukwe na ntụkwasị obi na Nna nke Eluigwe. Ọ dịghị ihe na-eme na ndapụta, ọbụghị ụfụ, ma ọ bụ ọ joyụ, ma ọ bụ ahụhụ, ma ọ bụ ịhụnanya. Ihe ndi a nile bu onyinye amara nke Nwa m nyere gi nke naedu gi n’ ndu ebighi ebi.
Ọkpara m rịọrọ gị maka ịhụnanya na ekpere n’ime ya. Ihunanya na ikpe ekpere n’ime ya putara: Mụ onwe m, dịka nne, ga-akuziri gị. Kpee ekpere na nkpuru obi gi ma n'abughi igu onu n'egbugbere onu. Nke a bụ ntakịrị onyinye dị mma ị nwere ike ịme n’aha Ọkpara m. Nke a, na ndidi, ebere, nnabata ihe mgbu na aja, emere ndị ọzọ.
Childrenmụ m, Ọkpara m na-ele unu. Kpe-kwa-nu ekpere ka unu hu kwa iru-Ya, ka O we kpughere Onwe-ya nye unu. Childrenmụ m, a na m ekpughere naanị otu onye bụ ezi eziokwu. Kpee ekpere ka ị nwee ike ịghọta ya ma nwee ike ịgbasa ịhụnanya na olile anya, inwe ike ịbụ ndịozi ịhụnanya m.
N’ụzọ ụfọdụ, obi nne m hụrụ ndị ọzụzụ atụrụ n’anya. Kpee ekpere maka aka ha di ngozi. Daalụ.